Arsenal Oo Ku Dhow Inay Heshiis La Gaarto Da'yarka Sporting Lisbon
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Arsenal oo ku dhow inay heshiis la gaarto da’yarka Sporting Lisbon
Arsenal oo ku dhow inay heshiis la gaarto da’yarka Sporting Lisbon
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto Sporting Lisbon weeraryahankeeda da’yarka ee Tiago Tomas .
18 jirkaan ayaa durbaba 25 kulan u saftay kooxda koowaad ee reer Portugal intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo ka qeyb qaatay shan gool iyo labo caawin.
Tomas ayaa kaliya heshiis waqti dheer ah u saxiixay Sporting bishii June ee la soo dhaafay, iyadoo ciyaaryahanka reer Portugal ee ka hooseeya 19 sano uu qandaraas la galay kooxda Lisbon ilaa dhamaadka ololaha 2024-25.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Sun , Arsenal ayaa ku dhow inay dhameystirto heshiiska xagaaga ee Tomas, iyadoo agaasimaha farsamada ee kooxda reer London Edu uu wadahadal la yeeshay agaasimaha Sporting ee kubada cagta Hugo Viana .
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxda diyaar u yihiin inay aqbalaan dalab dhan 20m sababo la xiriira jawiga dhaqaale ee haatan jira, iyadoo cudurka coronavirus uu sababay dhibaatooyin dhaqaale oo ka jira adduunka kubada cagta.
Tomas, oo awood u leh inuu ka ciyaaro dhowr boos oo weeraryahanno kala duwan ah, ayaa dhaliyay labo gool isla markaana diiwaan geliyay labo caawin 18 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Previous articleEden Hazard ayaa ku soo laabtay tababarka Kooxda Real Madrid
Next articleMark Lawrenson oo saadaal ka bixiyay Kulanka Leicester City v Liverpool FC